Indawo esemthethweni yokungena kwe-1xbet - 1xbet Iibhonasi kunye neekhowudi sokunyusa
1xbet esemthethweni indawo
Ubhuki 1xbet ivulwe kutsha nje – phakathi 2007, nakwi-intanethi kwi 2011. Ixesha elifutshane, inkampani iye yaba ngomnye wabemi abaphumeleleyo nabakhulu ehlabathini. Ukuthandwa kuphawulwa ngumgca omkhulu wokubheja kwezemidlalo, ii-coefficients eziphezulu kunye nolwazelelo kunye nokuqonda ngokulula kwesixhobo esisemthethweni sewebhu. Phakathi kwamaqabane e-brand kukho iinkampani zemidlalo ezinkulu njenge-Serie A yase-Itali kunye ne-La Liga yaseSpain.
Sayina ungene kwiKhabinethi yobuqu ye-1xbet
Khuphela usetyenziso lweselfowuni lwe-iOS kunye ne-Android
Ukufumaneka kwamacandelo kunye nezihlomelo
Ibhonasi kwidiphozithi yokuqala
Indlela ukurhoxisa imali 1xbet
Indawo esemthethweni yenkampani iyaqondakala kwaye iyafikeleleka: umthunzi ophambili woyilo umhlophe kwaye luhlaza. Ukuhambahamba kwesi siza kwenziwa lula, Zonke izinto eziyimfuneko kunye namacandelo ziyabonakala. Umphezulu wesiza uzaliswe ngumxholo wobugcisa, apho umsebenzisi asombulula imiba yenkqubo kwaye enze ubuqhetseba: ukubhalisa, ukungena ungene, usebenzisa usetyenziso kunye noseto lojongano.
Ezantsi apha ngezantsi ngamacandelo kwiindidi zemidlalo:
Ukubheja kwezemidlalo ngoku.
Kwicala lasekhohlo kukho ibhloko yomdlalo, apho ulwazi lokubheja bukhoma lufumaneka khona. Icandelo eliphilayo liqukethe imidlalo yezemidlalo onokubheja kuyo ngoku. Indawo yokusebenza yale ndawo ibekwe kancinci ngasekunene, Nantsi iprofayili yobuqu 1xbet. Emazantsi resource ulwazi olukhoyo malunga 1xbet kunye nemithetho.
Umdlali naye unokufunda idatha malunga:
iinketho zokufaka kunye nokurhoxisa okuphumelela.
Eyona webhusayithi yenkampani inalo lonke ulwazi oluyimfuneko olufunwa ngumsebenzisi ngexesha lomdlalo.
Iakhawunti yobuqu yomdlali nayo ilula kwaye iyaqondakala ngokulula. Ngaxeshanye, Inokhetho olufanelekileyo kunye neempawu zokulawula amanqaku, ukubheja kunye neakhawunti.
Ukungena, umdlali angasebenzisa enye yeendlela eziphakanyisiweyo:
Ukufikelela okuyisiseko kwiprofayile ye-BC. Olu lolona khetho luthandwa kakhulu. Apha kuya kufuneka ubonise ukungena ngemvume kunye negama lokugqitha, ezenziwa kuqala ngumdlali kubhaliso. Ukuya kwiphepha lakho, kwifom ekhethekileyo kufuneka ufake igama lakho lokungena kunye negama lokugqitha. Ezi datha zinokugcinwa kwigajethi yakho okanye uyibhale phantsi. Xa ungene kumdlali unokuchaza njengegama lomsebenzisi i-imeyile, iselfowuni okanye i-ID yeakhawunti.
Ugunyaziso ngeselula. Xa usenza iprofayili, Umdlali kufuneka ufake inombolo yefowuni eyabelwe iakhawunti. Ukuba kunyanzelekile ukuba ugunyazise ngefowuni ephathekayo, umdlali kufuneka ucacise kumgca ingxelo ingxelo inombolo yakhe iqhotyoshelwe kwiprofayili. Ifowuni iya kufumana iSMS enekhowudi yokufikelela ngexesha elinye. Igama lokugqithisa lisebenza kuphela ngexesha elinye lokungena. Emva kwexesha xa ungena kwakhona uyakucela ikhowudi yexesha elinye.
Gunyazisa kusetyenziswa uthungelwano lwasentlalweni. Xa usenza iprofayili, unokwabela inethiwekhi enye okanye ezingaphezulu kwezentlalo kwiprofayile yakho. Umzekelo, Facebook, Twitter, I-Instagram. Ukwenza oku, Kuya kufuneka ungene ngemvume kunye negama lokugqitha leprofayile kwinethiwekhi yoluntu. Emva koko uya ngokuzenzekelayo kwiprofayili yakho.
Wonke umbhejisi unokukhuphela uguqulelo lweselfowuni simahla. Olu khetho lukuvumela ukuba usebenzise nayiphi na inkonzo ye-BC usebenzisa ifowuni okanye ithebhulethi yakho. 1xbet uguqulelo lweselfowuni luvumela:
Bukela nawuphi na umdlalo owukhethileyo.
Fumana ulwazi malunga nemizobo yetonamenti.
Jonga uluhlu lweziganeko.
Lawula utshintsho kumazinga.
Ubhejo nasiphi na isiphumo.
Ukubeka imali kwiakhawunti kunye nokurhoxisa imali.
Sebenzisa imivuzo, unyuselo kunye neekhowudi zokwazisa.
Nxibelelana neengcali zenkxaso yobuchwephesha.
Eyona mpumelelo iphambili kubaphuhlisi be-1xbet kunye nenguqulo yeselfowuni ithathwa njengonxibelelwano olungapheliyo 24 iiyure ngosuku. Akukho kusilela, iingozi, Unxibelelwano lwe-Intanethi okanye iimpazamo ngexesha lokusetyenziswa. Ubhejo ngalunye luya kwenziwa lubalwe ngokuchanekileyo. Ndiyabulela ekusebenzeni ngokupheleleyo kwesoftware yomthengi uqobo, iyakusebenza nakwesiphi na isixhobo nokuba yeyiphi na imodeli.
Ujoliso lwe-ofisi lusebenzisa izicelo eziselfowuni. Abathengi banokusebenzisa iinguqulelo ezimbini zesoftware ephathekayo, izixhobo ezisekwe kwi-Android kunye ne-iOS, ngokusebenza kwangoku kwangoku kunye nokukhawuleza. Isicelo seselfowuni asihlukanga kuhlobo olupheleleyo lwezixhobo zewebhu. Abasebenzisi banokwenza imisebenzi yabo yesiqhelo:
Bhalisa iakhawunti kwisiza.
Isoftware yabathengi yeselfowuni ivumela umsebenzisi, nokuba kuphi na emhlabeni, ukubheja, kwaye yenza lula le nkqubo, kuba ayifuni sikhangeli, kwaye zonke izinto eziyimfuneko kumdlalo kwindawo enye. I-app esemthethweni ye-iPhone kunye ne-Android inokukhutshelwa kwiwebhusayithi esemthethweni ye-1xbet. Abasebenzisi abanakhathazeka ngokhuseleko lwabo, njengoko inkqubo ihlangabezana nayo yonke imigangatho.
Ukudala iprofayili kwi-1xbet lelona nyathelo liphambili lokuqinisekisa umsebenzisi ngobume bomthengi. Ubhaliso lunamanyathelo amabini: ukwenza iprofayili kunye nokuqinisekiswa okulandelayo kolwazi lomntu siqu. Kuba iofisi isebenza ngokungekho mthethweni kwiimarike ezininzi, inkqubo yobhaliso yenziwe lula kwaye ayinazo iimfuno ezithile.
Abasebenzisi baneendlela ezine zokubhalisa:
Ngenombolo yefowuni ephathekayo.
Makhe sihlalutye zonke iindlela ngokweenkcukacha:
Ubhaliso nge-imeyile yeyona ndlela inde kwaye inzima ekunikezeleni iprofayili, kodwa kwangoko unika umdlali ukufikelela ekusebenzeni kwesiza. Ekuqaleni, kufuneka ungene kweli lizwe, ummandla, isixeko, igama eliphelele, imali, i-imeyile kunye nenombolo yefowuni, kunye nokwenza ikhowudi yokufikelela. Cofa u “Ubhaliso” iqhosha. Ikhonkco liya kuthunyelwa kwidilesi ye-imeyile echaziweyo apho kuya kufuneka ugqibezele ubhaliso kunye nokuqinisekiswa komsebenzisi. Emveni kwalonto, unokwenza idiphozithi kwimidlalo eseleyo kwaye wenze ukubheja.
Ubhaliso olukhawulezayo lweakhawunti yobuqu kwi 1 cofa ngokukhawuleza. Kufanelekile kwabo bangafuni kuchitha ixesha kwaye bafuna ukuqala ukubheja kwangoko. Ukuze wenze iakhawunti ngokukhawuleza, khetha i “Cofa kanye” indlela kwindawo yeofisi. Khankanya ilizwe, lwemali kwaye ujonge indawo yokhuselo yogaxekile. Cofa “Bhalisa”. Kwifestile ebonakalayo, Uya kubona inombolo yakho yeakhawunti kunye nekhowudi yokufikelela ezenzekelayo. Emva kwexesha unokutshintsha iphasiwedi kwi “Inkcukacha zimntu” icandelo.
Inkqubo iya kubonelela ukugcina inombolo kunye nekhowudi yokufikelela kwisixhobo sakho kwifayile okanye kwifomathi yomfanekiso okanye uthumele olu lwazi kwi-imeyile. Esi sisiphelo sobhaliso – ungafaka imali yakho eseleyo kwaye uqale ukubheja. Ukurhoxisa imali kwaye ufumane umvuzo owamkelekileyo, Kuya kufuneka ugcwalise ulwazi lwakho lomntu kwiinkalo ezibonisiweyo kwaye uqinisekise iprofayile yakho.
Ukwenza iprofayili ngenombolo yefowuni
Olona ncedo luphambili kukhetho olukhuselekileyo kukukhusela iprofayile yakho. Ukwenza i akhawunti kwi 1xbet usebenzisa ifowuni yakho ephathekayo, khetha le ndlela emva kokucofa kwi “Bhalisa” iqhosha. Chaza ilizwe lakho kunye nenombolo yakho yefowuni kwifayile ye- “Inombolo yomnxeba” intsimi. Khetha imali yakho kwaye uzikhusele kugaxekile, emva koko ucofe ku “Bhalisa”. Ngenisa inombolo kwi-SMS kwicandelo elivelayo. Emva koko uya kuba nakho ukutshintsha ikhowudi yokufikelela kwaye ugcwalise ulwazi lomntu siqu.
Ukwenza iprofayile ngokusebenzisa uthungelwano lwasentlalweni
Ukwenza iprofayili ngokusebenzisa uthungelwano lwasentlalweni, cofa iinethiwekhi zentlalo kunye neqela labathunywa. Emazantsi uza kubona iwindow yokukhetha imali kunye noluhlu lwenethiwekhi. Ungabhalisa ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu ngokucofa iqhosha elifanelekileyo. Emveni kwalonto, gcalisa izithuba, kungenjalo kuya kuba nzima ukukhupha imali kwixa elizayo.
Ubhaliso olumnandi olusuka kwiselfowuni
Kubanini bee-smartphones kunye neepilisi ze-BK zibonelela ngokusetyenziswa kweselfowuni kwe-Android kunye ne-iPhone, kunye nendawo ekuhanjwa nayo. Zonke iinguqulelo zeselfowuni zinokusebenza okufanayo nendawo yedesktop – Apha ungabhalisa iakhawunti, wenze idiphozithi kunye notsalo, kunye nokubheja kunye nokubukela ukusasazwa bukhoma.
Ukwenza iprofayili ngokusebenzisa iapp
Ungalufumana usetyenziso lwe-Android kunye ne-iPhone kulwazi olusemthethweni lwe-1xbet. Izicelo zingalandwa kwindawo esemthethweni yenkampani yokubheja simahla. Ukurejista iprofayili ngokusebenzisa usetyenziso lweselfowuni, Cofa kwi “Ubhaliso” iqhosha phezulu kwesikrini. Jonga enye yeendlela ezine zobhaliso ezilapha ngasentla, kwaye ulandele imiyalelo.
Ukwenza iprofayili ngendawo eshukumayo
Ukwenza iprofayili kwindawo ekuhanjwa kuyo akufani nokubhalisa kwinguqulelo yedesktop okanye kwi-mobile app. Kukwakhona nokubhalisa okukodwa, nge-imeyile, ngokusebenzisa uthungelwano kunye neenombolo zomnxeba.
Inkqubo yokuqinisekisa yenziwa ngomnxeba wevidiyo. Rhoqo inkonzo yokhuseleko ye-1xbet inokucela umsebenzisi ukuba aveze iipasipoti eziphindiweyo zombane kunye nefoto. Ngexesha lokuqinisekisa, Kufuneka iifoto zifezekiswe, ekufuneka zifane nezo zifunyanwa ezibhankini xa kukhutshwa amakhadi.
Indawo ifikelela kubaphulaphuli abaninzi. Abahlali bamazwe ahlukeneyo banokusebenzisa le ndawo. Ukongeza kwiinguqulelo zesiRashiya nesiNgesi, zininzi nezinye. Abahlali baseBelarus, China, Lathviya, ENgilani, Grisi, Melika, ElamaTaliyane, Jemani, Norowe, Ostreliya, IBrazil kunye namanye amazwe banokusebenzisa indawo ngolwimi lwabo lweenkobe. Inkampani inikezela nge 52 Iinguqulelo zoovimba bewebhu. Ungabhalela iqela lenkxaso ngeelwimi ezahlukeneyo. Ukuba uthetha isiRashiya, IsiNgesi okanye naluphi na olunye ulwimi, ngekhe ubenobunzima kunxibelelwano.
Xa ubhalisa iakhawunti kule ndawo, ungakhetha enye ye 100 iimali, kubandakanya i-cryptocurrensets. Amaxesha amaninzi kwenzeka ukuba abasebenzisi bayangxama ngokukhetha iimali xa bebhalisa bafuna ukutshintsha ukhetho. Kukho nezinye izizathu, umzekelo, inqanaba lokuguqulwa apho ibhalansi yomdlalo igcwaliswa kwakhona ayifanelekanga. Ukuba ngequbuliso uthathe isigqibo sokutshintsha imali, bhalela ukuxhasa, kwaye iingcali zikhawulezisa ukusombulula ingxaki yakho.
1I-xbet sisixhobo esilula nesicacileyo, yenzelwe ngombala omhlophe noluhlaza okwesibhakabhaka.
Ngaphezulu kwephepha eliphambili kukho zonke iindlela zobugcisa apho umsebenzisi ngamnye anokukhulisa indawo ngokuhambelana nezinto abazithandayo. Icandelo elingezantsi lephepha limema umsebenzisi ukuba akhethe elinye lala macandelo:
Kwicala lasekhohlo lephepha licandelo lokudlala, apho unokufumana khona ulwazi malunga nokubheja kwangoku. Kwicandelo elibukhoma kukho izinto ezininzi ezivela kwihlabathi lezemidlalo, kwaye abathengi banokwenza ukubheja kwangoko. Icala lasekunene yindawo yokusebenza yomsebenzisi, apho ulwazi malunga neakhawunti lufumaneka. Inxalenye esezantsi yephepha – ulwazi malunga neofisi kunye nemigaqo yentsebenziswano, kunye nolwazi malunga nokuba zeziphi iintlobo zokubheja ezinokwenziwa, ungaqhagamshelana njani nabameli benkxaso yobuchwephesha okanye usebenzise usetyenziso oluselfowuni.
1Inkampani ye-xbet ihlala ikonwabisa abathengi bayo ngohlaziyo lokubheja kunye nomxholo womdlalo. Ukongeza kwi-single eqhelekileyo okanye i-expression, kunokwenzeka ukuba wenze ukubheja okuninzi okanye i-anti-expression.
Iindidi yokubheja ezikhoyo kubathengi 1xbet:
Ukubheja okuninzi – Ukucaciswa okuninzi kunye nokubheja okukodwa kudityaniswe ngokudibeneyo okufanelekileyo kumthengi ngamnye.
Ukubheja okunemiqathango zizimvo ezizimeleyo komnye nomnye. Umthathi-nxaxheba angaphumelela kumsitho omnye okanye kwiziganeko ezininzi ngaxeshanye.
I-Aniexpress ichasene nokubonisa okwaziwayo: umsebenzisi uya kuphumelela kuphela ukuba enye yeziganeko kubhejo lolahlekileyo.
Unethamsanqa – uhlobo lokubheja, xa ukhetha into onokugqiba kuyo ngaphezu kweziganeko ezintathu.
I-Patent lubhejo olukhethekileyo oludibanisa uninzi lwentetho yeziganeko ezininzi ngaxeshanye.
Amalungu amatsha eofisi yeebhuki amenyiwe ukuba asebenzise eli thuba lilodwa lokuphinda kabini ibhalansi yemidlalo ngokuzalisa iakhawunti ngenani elithile. Ukufaka imali eseleyo kuya kufuneka wenze amanyathelo aliqela alula:
Bhalisa kwiwebhusayithi esemthethweni yeenkampani.
Gcwalisa ifom ngolwazi oluhlaziyiweyo.
Ngenisa imali eseleyo yomdlalo.
Amanqaku ebhonasi aya kunikezelwa ngokuzenzekelayo.
Ungalithatha eli thuba kube kanye. Ukurhoxa kwikhadi lakho lebhanki, Kuya kufuneka udlale isixa esipheleleyo samanqaku amaxesha amahlanu ngendlela yokubonisa.
Abathengi besiza banikwa uluhlu olubanzi lokunyusa kunye neebhonasi, ezona zidumileyo zezi:
Phinda ufake imali yebhonasi. Abo sele benze ukubheja banokufumana umvuzo wokufaka iakhawunti yomdlalo wexesha lesibini nelilandelayo.
uLwesithathu – phinda-phinda kabini. Kubalulekile ukwenza ukubheja ngoMvulo nangoLwesibini – kuphela phantsi kwale meko kunokwenzeka ukuthatha inxaxheba kwinkqubo. Elona xabiso liphezulu lomvuzo lisetwa yinkampani uqobo.
Ngethamsanqa ngoLwesihlanu – ubungakanani bediphozithi buzophindeka kabini, ngaphandle kokuba ukunikezelwa kwemali kwenzeke ngolwesiHlanu. Ukuthatha inxaxheba kule nkqubo kunokwenzeka kuphela ukuba umxhasi akalilo ilungu lolunye unyuselo.
Ukubuyiselwa kwemali kwi-VIP. Inkqubo yokunyaniseka yabathengi benkampani inike ithuba lokubuyisa inxenye yemali. Imali ebuyiswayo ngokuthe ngqo ixhomekeke kwinqanaba lomthengi. Kukho zizonke 8 amanqanaba kwindawo, eyokuqala yeyobhedu. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba le nkqubo isebenza kuphela xa idiphozithi yenziwe ngenkqubo yeRoyal Pay. Isixa semali ebuyiswayo siyahluka ukusuka 5 ukuya 11%.
Ukubetha ibhukumeyikha. Umthengi unokufumana iibhonasi ngokulwa nabameli benkampani.
Idabi leengcali, apho ibhaso elikhulu liyimoto.
Ukwengeza, abathengi bafumana iibhonasi zokuzalwa ezizodwa, kwaye banokubheja kwangaphambili. Kunzima ukulawula ukubonakala kwezithembiso ezintsha kunye nokunyuselwa, Kuyacetyiswa ukuba urhume kule ncwadana: Zonke izinto ezintsha ziya kufunyanwa nge-imeyile, idilesi echaziweyo xa ubhalisa.
Ukubheja inkampani 1xbet yinkampani esebenzayo ejolise nje kuphela ekutsaleni abadlali abatsha, kodwa nokugcina abasebenzisi abanamava.
Ukubheja kwindawo yeofisi yokubheja ngabahlali bamazwe ahlukeneyo, kwaye ke ngaphezulu kweentlobo ezingamashumi amahlanu zeemali ezikhoyo zentengiselwano yemali. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukhetho lwemali lwenziwa ngexesha lenkqubo yobhaliso; akunakwenzeka ukutshintsha imali kamva.
Ungafaka iakhawunti yomdlalo kuyo nayiphi na imali, ngaphandle kwale ibikhethwe ekuqaleni: Inkqubo iyakuguqula ngokuzenzekelayo xa kufakwa ikhredithi.
Idiphozithi kwiakhawunti yomdlalo inokwenziwa ngeendlela ezahlukeneyo: umsebenzisi ngamnye angakhetha indlela elula yokwenza idiphozithi kumakhulu akhoyo. Uluhlu luxhomekeke kwilizwe ahlala kulo umthengi.
Eyaziwayo uhlala usebenzisa amakhadi ebhanki, iinkqubo zentlawulo ngekhompyutha, hlaziya ngomqhubi weselfowuni, Ukutshintshwa kwebhanki ngqo.
Ukurhoxisa imali kwiakhawunti yokudlala yomthengi, Kuya kufuneka ungene kwinkqubo kwaye ukhethe isithuba esifanelekileyo kwikhabhinethi yakho yobuqu. Emveni kwalonto, umsebenzisi uya kuba nokufikelela kwiindlela anokuzisebenzisa ngalo mzuzu.
Ungadlulisa okuphumelela kuye:
Ngena ngemali ezinkozo.
Sebenzisa ibhanki ekwi-intanethi.
Nkqu nabaxhasi bathatha inxaxheba ebonakalayo ekubhejeni nakwimidlalo, kodwa wala ukuya kwinkqubo yobhaliso, Ungathatha ithuba lokurhoxa.
Imisebenzi yenkampani ibangelwa bubukho belayisensi esemthethweni ekhutshwe ngurhulumente wesiqithi, ebekwe kuLwandle lweCaribbean.
Iwebhusayithi esemthethweni yenkampani ipapasha rhoqo iindaba zamva nje kunye neziganeko zangoku. Ukugcina unolwazi ngayo yonke into eyenzekayo, Kuyacetyiswa ukuba ubhalise kule ndawo kwaye ubhalise kwincwadana. Ukwenza njalo, kubalulekile ukuba ukhankanye idilesi ye-imeyile esebenzayo. Njengomgaqo, Iindaba zeendaba ziqulathe ulwazi malunga nokusilela kwenkqubo okanye unikezelo olutsha lwentengiso, apho unokufumana umvuzo owongezelelweyo.
Indlela ukugembula 1xbet?
Ukwenza ukubheja kokuqala kuya kufuneka uye kwiwebhusayithi esemthethweni yenkampani, bhalisa kwaye wenze idipozithi yokuqala kwiakhawunti yokudlala.
Abathengi besiza banikwa uluhlu olubanzi lweebhonasi: kwimivuzo yokufaka kubhaliso kwiimoto ezitsalwayo. Izibonelelo zangoku zipapashwa rhoqo kwiwebhusayithi yenkampani.
Uyikhupha njani imali kwiakhawunti?
Ukurhoxisa imali kwiakhawunti yokudlala, Kuya kufuneka ukhethe olona khetho lufanelekileyo lwenkqubo yokuhlawula kwaye ulandele ngokungqongqo amanyathelo achazwe kwimiyalelo kwiwebhusayithi yokubheja.
Indlela ungene kwi 1xbet kwikhompyutha yakho?
Ukuze uvule iakhawunti yakho, Kuya kufuneka uye kwiwebhusayithi esemthethweni yeofisi. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba abanini beakhawunti kuphela ngabo basebenzisayo ababhalise kwinkqubo. Ukuba umsebenzisi ungene okokuqala, Ixesha lokufikelela kwiakhawunti liya kuncitshiswa, kunye noluhlu lwemisebenzi enokusetyenziswa. Ukubangaba umthengi ubhalisile ngaphambili, ekuphela kwento eseleyo ukuyenza kukungena ngemvume kunye negama lokugqitha kunye nokungena kwindawo leyo.
Ingaba ithetha ntoni: inombolo yakho yefowuni ayifumaneki kwi-1xbet?
Xa ingxaki efana inombolo yefowuni yokukhangela imposiso kwinkqubo 1xbet ngokufuthi nazo abasebenzisi nkonzo: bobabini abaqalayo kunye neengcali. Umyalezo ubonakalisa ukuba akunakwenzeka ukuba uzisebenzise ngokupheleleyo zonke iinkonzo zenkampani ngalo mzuzu. Oku kuyinyani ngokukodwa xa kusenziwa imicimbi yezemali.
Umsebenzisi obona umyalezo ukuba inombolo yefowuni ayilunganga, Akusetyenzwanga okanye akufunyanwa kuthathwa njengomthengi ongaqinisekiswanga kwinkqubo, kwaye ke ayivumelekanga ukusebenzisa iinketho ezithile de ibe igqibile inkqubo.